Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Akpadoro N'ime Afọ Nile - Ngwọta OMG
Igwe Ọdụ Igwe na teknụzụ nke Na-agbaze Ahụ Kemgbe Afọ
N'etiti ọtụtụ ngwa elektrọniks anyị na-eji kwa ụbọchị, igwe doro anya bụ n'etiti ndị a ma ama. Site na igwe ojii gaa na laptọọpụ na sistemụ nchekwa ụlọ, ihe niile nwere obere igwefoto. Ọ bụ ezie na ebumnuche bụ isi nke igwefoto bụ ịdekọ ncheta kachasị ama ma ọ bụ ihe ndị masịrị anyị, ụfọdụ bu n'uche maka ọrụ ụfọdụ. Ihe omumaatu mbu bu kampo ahu, ma obu igwefoto nke eyi na aru ma obu jidesie ike.
Dị ka aha ahụ na-egosi, a na-eji kamera emechi anyị. Ndị ọrụ kacha eji ha bụ ndị uwe ojii America ma ọ bụ ndị ọrụ mmanye iwu, ndị na-eji ha eme ihe ndekọ na akaebe. Action cams bụ ụdị igwefoto ndị ọzọ nwere ike eyi na ahụ wee nye gị ohere ịdekọ ihe omume gị. Nke a na - emekwa ka ha dị mma maka ịde blọgụ vidiyo ma ọ bụ ịgbapụ egwuregwu.
N'ime afọ ole na ole gara aga, teknụzụ jikọtara ya na ihe ọhụrụ yana ọganiihu nke ndị uwe ojii na nchekwa echegharịala ọtụtụ akụkụ nke ndị uwe ojii na ọrụ nchekwa. Karịsịa na-ahụ teknụzụ dị ka mgbatị nke iwu iji wee mee ihe ike (dịka iji TASERs) - dị ka nyocha DNA (Roman, 2008) - yana usoro iji melite arụmọrụ na arụmọrụ nke ọrụ ahụ. nke ndị uwe ojii nyere na njikọta mpụ na njikọta na amụma amụma uwe ojii (ọgụgụ isi-Led) - Policing) na njikwa ọmụma (dị ka Hot ebe nyocha mere site CrimeView site na POL Police Information System).
Ejikwala teknụzụ eme ihe dị ka usoro onyunyo na nyocha nke ụmụ amaala nkịtị na ndị uwe ojii. Ná mmalite 1990s na ndị uwe ojii US dị iche iche, ese foto na-agbanye na igwefoto vidiyo ụgbọ ala pụtara dị ka usoro ọhụụ maka ịdekọ ezigbo mmekọrịta n'etiti ndị uwe ojii na ndị nkịtị (Pilant, 1995).
Agbanyeghị ngbanwe mbụ nke ndị ọrụ uwe ojii nyere igwefoto ndị a (Pilant, 1995), nyocha egosila na ha amụbaala ikike nchekwa nke ndị ọrụ uwe ojii na-enwe n'ịrụ ọrụ ha, na-abawanye ịkwụ ụgwọ na nghọta na nke ndị uwe ojii. ma belata ụgwọ ọ bụla nke ndị uwe ojii. N'ihi nke a, ndị ọrụ nchekwa iwu US nabatara teknụzụ a ma nabata ya (IACP, 2003).
N’aka nke ọzọ, sistemu CCTV abụrụla nke a na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ obodo na ndị mmanye iwu dị iche iche ka ha na-enye usoro nlele na mgbochi mgbochi abụọ dị oke mkpa, dịka mgbochi mpụ n'ozuzu ya na dịka ngwá ọrụ maka nyocha ndị uwe ojii.
N’ezie, mmụba na mmụba nke ama (nke nwere vidiyo na igwefoto igwe ọdịnala wuru) n’oge igwe dijitalụ a abaala ụba ikike idekọ ihe dịka ha na-eme, karịchaa n’oge ndị uwe ojii na ndị amaala na-akpọtụrụ. N'ihi nke a, vidiyo na ndekọ ọdịyo abụrụla akụkụ zuru oke nke ndụ 21st narị afọ.
Gini bu Ara Worn Cameras-BWCs?
Mmepe ọgbara ọhụrụ a na-arụ na ntuliaka nke ndị uwe ojii tinyere uwe ojii na nke ndị ọrụ uwe ojii na-eyi. Teknụzụ nke iji igwefoto ndị a dị nfe ma aga-akọwa ya ma emesịa.
Igwefoto nke onye uwe ojii ma ọ bụ onye na-eche nche (nke bụ obere ngwaọrụ nwere ike idekọ foto na ụda) na-edekọ mmekọrịta nke onye uwe ojii ma ọ bụ onye nche ya na nwa amaala, onye ọ bụla mere ihe ma ọ bụ onye mere mpụ. Ndị ọrụ nchekwa na ndị ọrụ nchekwa na-eji vidiyo na ọnụnụ a na - ejigide igwefoto mee ihe iji gosipụta mmekọrịta ha na ndị nkịtị na nke ha na - aza ajụjụ maka ya.
Kedu otu igwefoto dijitalụ si arụ ọrụ?
Teknụzụ a na-eji igwefoto arụ ọrụ na ogwe osisi ma ọ bụ n'ahụ onye uwe ojii ma ọ bụ onye nche. Ejiri eriri sitere na olu onye uwe ojii were obere igwefoto ahụ rụọ ọrụ ma ọ bụ tinye ya n'akpa uwe ma ọ bụ olu akwa uwe ndị uwe ojii ahụ. Enwere ike itinye ya na ugogbe anya maka anwụ nke onye uwe ojii yi. N'ozuzu, igwefoto a na-ebugharị ebugharị n'akụkụ dị elu nke ahụ iji mee ka ọhụhụ dị mma mgbe ị na-edekọ vidiyo na ọdịyo.
Teknụzụ a nwere ike weghara vidiyo na snapshots ọdịyo. Nke a na - enyere ya aka idekọ ihe ọfịkị na - ahụ n'oge ọ na - emegharị ya, ya na ya na - edekwa usoro ọ bụla a na - eme n'ihu ya na onye ọ bụla ọ batara. Ikike ndekọ ndekọ nwere ike isite obere awa rue awa 14. E nwere ọtụtụ igwefoto obere igwe dị na uwe ndị uwe ojii na-eyi, gụnyere Panasonic, VIEVU, TASER International, WatchGuard, na Wolfcom Enterprises. Ofgwọ nke igwefoto dị otú a nwere ike ịdị na $ 200 ruo $ 1000, nke sitere na ihe dị ka $ 185 ruo ihe dị ka $ 925.
Igwefoto eji aka mee nwere ike ịgụnye ọtụtụ nhọrọ, dị ka njikwa igwefoto njiri-aka nke onye ọrụ, dị ka ntinye aka na bọtịnụ ndekọ, njikwa ihuenyo mmetụ, vidiyo, na nkwanye ụda na ike nlele, na ịkpọghachi ugbu a site na ihuenyo enwere ike itinye aka. . A na-ebudata vidiyo vidiyo ahụ site na igwefoto site na igwefoto igwefoto na ngwaọrụ nchekwa mpaghara (dịka ọmụmaatụ sava dị na netwọkụ dị na ya) ma ọ bụ site na igwe nchekwa nchekwa igwe ojii dị na ntanetị, ebe enwere ike izo ya ma jikwaa ya. Modelsfọdụ ụdị na-ekwekwa ka ebugo vidiyo a mgbe onye uwe ojii abanyelarị na ọrụ.
Nkà na ụzụ nke iji obere igwefoto na-agụnye ọtụtụ ihe, nke dị iche n'etiti ndị nrụpụta dị iche iche nke igwefoto dị ka ekwuru. Iji maa atụ, sistemu TASER International akpọrọ AXON gụnyere-
Obere igwefoto dị na uwe ojii (ma ọ bụ okpu ma ọ bụ uwe elu ma ọ bụ ugogbe anya maka anwụ) nke na-edekọ ihe onye uwe ojii na-ahụ,
Obere ngwaọrụ (dịka ọmụmaatụ Smartphone Laptop) ebe edobere ihe vidiyo ahụ; na
Batrị nke ga-ewe ihe dị ka awa 12 ruo 14 ma gụnye igwefoto ọkụ igwefoto iji mee ka igwefoto weghara foto ndị uwe ojii na uche ọ chọrọ.
Usoro AXON na-abịa site na ọrụ nchekwa nchekwa igwe ojii ebe onye uwe ojii ma ọ bụ onye ọrụ nchere na-etinye onye na-edekọ ihe n'ime ebe ana-echekwa, nchekwa nchekwa weebụ ọzọ n'aka nke VIEVU nwere sistemụ igwefoto bụ sistemu sistemụ ngwaọrụ kọmpụta nke ndị ọrụ uwe ojii na-ebugharị n'ahụ ha nke gụnyere vidiyo na igwefoto vidiyo na igwe ojii sitere na igwe ojii na nchekwa data.ice na-ebugote vidiyo niile edere na nchekwa data.
N’aka nke ozo, VIEVU ebu sistemu igwefoto bu ihe eji atughari ya nke nwere komputa nke ndi uwe ojii n’aru n’ahu ha nke gunyere igwefoto vidiyo na igwe oyuyo na igwe igwe ojii na ebe nchekwa.
Nzuzo 6334 3 Echiche Taa